Ra’iisul wasaaraha oo ka hadlay musuq-maasuqa doorashada Aqalka hoose iyo arrimo kale oo badan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaaraha oo ka hadlay musuq-maasuqa doorashada Aqalka hoose iyo arrimo kale oo badan
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa si qoto-dheer uga hadlay musuq-maasuqa la sheegaayo inuu hareeyay doorashooyinka Aqalka hoose iyo wareegto muran dhalisay ee uu soo saaray guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Wareysi uu ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid siiyay teleefishanka Somali-cable ayuu ku sheegay in la buun-buuniyay wararka la xiriira in madaxda sare ee dowladda ay saamayn ku leeyihiin doorashada Aqalka hoose ee baarlamaanka ee hadda ka socota magaalooyinka maamul goboleedyadda dalka.
“Runtii waxaa wax dooraanaya waa qabaa’ilka, isimada ayaa soo xulaya 51 ergay ee codaynaya, annagu gacan kumaanaan lahayn, iyagaa u kala qeybsaday jifooyin, annagu Xamar ayaanu joognaa saamaynta aanu ku yeelan karo waxay tahay mid la buubuuniyay” Sidaas waxaa yiri ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid.
Sidoo kale, ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa ka hadlay doorashada xubnaha Aqalka sare iyo hoose ee Somaliland iyo warqadii uu dhawaan soo saaray guddoomiyaha barlamaanka federaalka Prof. Jawaari ee la xiriirtay xubnaha Aqalka sare ay gaar u tahay beelaha Soomaaliland oo aysan waxba ku lahayn beelaha Sool iyo Sanaag.
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo hadaladaasi ka jawaabaya ayaa yiri “Runtii waraaqdaas guddoomiyihu uu qoray, hada waraaq dowladu ama xukuumadu qortay ma ahayn, waa rajeynaynaa haddii alle idmo marka aan Xamar ku laabano in arrintaas wax laga bedelo, oo xal deg deg ah arrintaas loo helo, oo dadkii la fariisiyo oo dad is ogol aanu kasoo saarno labada dhinac”
UNHCR denies abuse of Somali refugees in Kenyan camp